Dell Streak kiniin 7-inch ah oo wata Android horey u soo bandhigayay | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | Qalabka kale, Kiniiniyada Android
CES 2011 ayaa la soo gabagabeeyey runtiina waxay tahay in sanadkan uu dhadhan weyn nooga tagay afka, oo leh dhadhan cagaaran oo cajiib ah. Waana in Android ay ku xaaqday sannadkan carwada teknoolojiyadda adduunka ugu weyn. Laga soo bilaabo Androidsisis waxaan kuugu duqeynay dhammaan wararka ugu fiican ee lagu soo bandhigay daabacaddan, sida kiniin cusub oo qurux badan Motorola, ama kii ugu dambeeyay tooy ka yimid HTC. Hadda waa markiisa Dell, oo soobandhigay tabeelkooda cusub ee loo yaqaan 'Dell Streak 7'.
Waqtigaas Dell wuxuu sameeyay kiniin 5-inji ah, Dell Streak 5, laakiin aad umay guuleysan sidaa darteed markale ayey isku dayi doonaan laakiin markan shaashad 7-inji ah. Faahfaahinta ayaa aad u xiiso badan tan iyo, Waxa u sii dheer socodsiinta Android 2.2 oo loo cusbooneysiin karo Gingerbread, kiniinkan 4G wuxuu ku shaqeyn doonaa 2Ghz Nvidia Tegra 1 processor. Waxaan horey u leenahay kaniini taasWaxay ka faa'iideysan doontaa hagaajinta cayaaraha fiidiyowga ee qalabka leh processor-ka.
Yeelan doonaan laba kamaradood, 1.3 Mpx hore ah si loo sameeyo wicitaano fiidiyoow ah iyo gadaal 5 megapixel ah oo kuu oggolaan doona inaad duubto fiidiyowyo tayada 720p ah. Ugu dambeyntii muuji aad 16GB xasuusta gudaha, oo lagu ballaarin karo 32, marin Wi-Fi ah iyo kiiboodhka Swype taas oo ka dhigaysa kaniinigan ikhtiyaar aad u soo jiidasho leh haddii lagu sii daayo suuqa qiimo aad u tartan badan. Sababta Labada guuldaro ee weyn ee aan ku arko kiniinkan: tartanka uu ku socdo iyo Nidaamkiisa Hawl. Laakiin marka hore fiidiyowga kiniinka si aad u aragto cabirkiisa iyo hawlgalkeeda dheecaanka badan.
Waxaan ka hadli doonaa marka hore nidaamka qalliinka. Laakiin waa maxay tan? Qoraalkan CES ayay ku soo bandhigayaan Malabka, ka nooca ugu horreeya ee Android ee kiniinnada, oo ay weheliso soo bandhigiddan, soosaarayaasha ugu waaweyni waxay soo bandhigaan kiniiniyadooda ugu fiican ee la shaqeeya Malabka. Ma qabtaaMaxay Dell ku qabanaysaa soo bandhigista kiniin ay la socoto Froyo? Waayahay, waad u cusbooneysiin kartaa Sanjabiisha oo waxaad marin buuxa u leedahay Suuqa Android. Laakiin, illaahay dartii, kiniinkani wuxuu leeyahay processor laba-koronto ah. Haraaga wuxuu ku shaqeyn karaa HoneyComb.
Waxaan rajeynayaa inay runtii u cusbooneysiineyso HoneyComb, maaha Android 2.3 sida imika ay noogu balanqaadeen Dell, iyo inay kiniinkan ku bixiyaan qiimo aad u tartan badan maxaa yeelay, iyadoo la siinayo qadarka kiniiniyada waxaa jiri doona, oo leh gorgortan dhab ah sida tan, Waxaan ka baqayaa in Dell uu kiniinkiisa ku siiyo buro fiican.
Xigasho | eurodroid
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Dell Streak kiniin 7-inji ah oo wata Android horey u soo bandhigayay
Waxaan xaqiijinayaa in la cusbooneysiin karo ilaa 3.2 HoneyComb, way shaqaysaa ok dhib la'aan
Gacmahayga ayaan ku hayaa .. waa qurux waana la cusboonaysiin karaa 3.2 HoneyComb, wuu shaqeeyaa dhib la'aan waana deg deg badan, sawirada inkasta oo qaraarka shaashadu aad u fiican yahay….
Andres Cabrera dijo
wicitaanada la helo?
Ku soo jawaab Andress Cabrera
si fiican ayey u shaqeysaa in kastoo mararka qaar aad dib ugu bilaabi karto badhanka dib udajinta gudaha. Batarigu wuu sii yaraanayaa, kharashka waa dhakhso, xallinta garaafka waa la aqbali karaa. Mid ka mid ah cilladaha ayaa ah inuusan lahayn isku xira HDMI. Loo cusbooneysiin karo ANDROID 3.2 dhibaato la'aan isla markaana aad u hagaagsan.
Waxaan ku qaatay 199 euro Telefoonka, si buuxda loo sii daayay iyo ikhtiyaarka 3G-WIFI.
Waqtigan xaadirka ah khibrada isticmaale waa mid cajiib ah.
Huruma 52 dijo
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, fadlan, haddii qof ii sheegi karo sida looga saaro daboolka kaarka SIM-ka, (jajabka unugyada), grs kun
Ku jawaab Huruma 52
Waa wax aad u fiican laakiin shaki ayaa iga galay haddii ay u shaqeyso sida unugga xq uu ku biirin karo sim
Ku jawaab Opaladamorazan
Anigu waxaan ku iibinayaa tayda xaalad aad u wanaagsan oo kiis gaar ah oo ku saabsan 400.000 kun oo pesos xiiseynaya wac 3207656854
Miino ayaa leh dhibaatada kamaradu muujiso qalad mana isticmaali karo
Jawaab walter roldan